Meizu 16Xs: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilowga rasmiga ah | Androidsis
Meizu 16Xs ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Eder Ferreno | | Meizu, Mobiles
Waxaa jiray dhowr toddobaad dillaacyo kala duwan oo ku saabsan Meizu 16Xs, telefoonka cusub ee sumadda Shiinaha. Dhab ahaantii, shalay uun a inta badan tilmaamaheeda. Markaa waxaan hore u ogeyn waxa laga filayo aaladdan cusub ee astaanta, oo ugu dambayntii si rasmi ah loo soo bandhigay. Marka qaabkani mar dambe sir noo hayn maayo.
Meizu 16Xs waxay ku timaaddaa badhtamaha sumadda Shiinaha. Qaab tayo leh oo ku jira qaybtaan, oo leh naqshad hadda jirta, baytar weyn iyo tilmaamo ku habboon arrintan. Markaa waxay ballanqaadeysaa inay noqoto moodel caan ka ah qeybta suuqan.
Waxay doorteen jaantusyo aad u dhuuban, in kasta oo qumman iyo sare ay xoogaa ka sii badan yihiin. Xagga sare ee la sheegay, xoogaa u janjeedha dhanka bidix, waxaan ka helnaa kamaradda hore ee aaladda. Naqshad xoogaa ka duwan, oo iska ilaalineysa isticmaalka darajada aan ku aragno wax badan oo ka jira bartamaha dhexe.
1 Faahfaahinta Meizu 16Xs
Faahfaahinta Meizu 16Xs
Meizu 16Xs ayaa ku jira waxyaabo badan oo aan ku aragno bartamaha dhexe ee hadda ku jira Android. Laga soo bilaabo kamaradda gadaal ee saddexlaha ah ilaa baytariga cabbirka fiican leh, waa aalad hadda jirta. Markaa waxay leedahay awood ay maanta caan ku noqoto macaamiisha. Kuwani waa tilmaamaheeda rasmiga ah:
Shaashadda: 6,2-inch SuperAMOLED oo leh xallinta 2232 x 1080 pixels iyo saamiga 18.6: 9
Kaameradda gadaal: 48 MP oo leh f / 1.7 + 5MP oo leh f / 1.9 + 8MP oo leh f / 2.2
Kaamirada hore: 16 MP oo leh f / 2.2 aperture
Nidaamka hawlgalka: Android 9 Pie oo leh Flyme 7 oo ah lakabka habaynta
Batariga: 4.000 Mah oo leh 27W lacag deg deg ah
Isku xirnaanta: WiFi 802.11a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, Dual SIM, GPS, GLONASS, 4G / LTE
Kuwo kale: Akhristaha farta shaashadda, furitaanka wejiga
Cabirka: 74,4 x 152 x 8 x 3mm
Miisaan: 165 garaam
Mid ka mid ah yaababka waaweyn ee aan ka helno Meizu 16Xs -kan ayaa ah in dareeraha farta lagu daray shaashadda. Illaa iyo hadda, ku dhawaad ​​dhammaan taleefannada Android ee adeegsada astaantan ayaa aad u sarreeya. Laakiin inyar wax yar ayaan aragnaa sida ay sidoo kale u socoto iyada oo ay jirto farqiga u dhexeeya badhtamaha suuqa. Qaabkani waa dareenkan tusaale wanaagsan oo tan ah. Waxaan sidoo kale ku haysannaa furitaanka wejiga aaladda la heli karo, sidaa darteed labada nidaamba waa suurtogal.
Kaamirooyinka ayaa ah mid kale oo ka mid ah awoodiisa. Waxay la timid kamarad gadaal oo saddex -laab ah, oo leh dareeraha ugu weyn ee 48 MP. In kasta oo aysan ahayn dareeraha Sony ee la isticmaalo, marka waa la isku dhex daray kiiskan. Laakiin wali waa isku -darka wanaagsan ee dareemayaasha, kuwaas oo ballan qaadaya sawirro wanaagsan, oo ay sidoo kale ku shaqeeyaan sirdoon macmal ah, sida ay shirkaddu xaqiijisay. Bateriga Meizu 16Xs wuxuu awood u leeyahay 4.000 mAh, taas oo shaki la'aan na siin doonta madaxbannaani wanaagsan. Gaar ahaan haddii aan tixgelinno inay hore ula timid Android Pie, oo leh shaqooyin badan oo maareynta baytariga ah.
Sida caadiyan dhacda xaaladahaas, kaliya taleefanka oo laga bilaabay Shiinaha ayaa lagu dhawaaqay. Kuwa xiiseynaya taleefankan casriga ah ayaa mar hore si rasmi ah uga iibsan kara Shiinaha. Iminka waxba lagama soo hadal qaadin suurtogalnimadeeda ah in laga bilaabo Yurub, in kasta oo aan rajaynayno inaan helno macluumaad dheeri ah waqti dhow. Waxaa laga yaabaa in shirkaddu ay xog badan ka hesho goor dhow.
Meizu 16Xs waxaa lagu bilaabay afar midab oo kala duwan, kuwaas oo kala ah caddaan, buluug, madow, iyo shacaab. Marka la eego noocyada, waxaan leenahay laba nooc oo kala duwan oo taleefanka ah, kuwaas oo ku kala duwan kaydintooda midna 64 midna 128 GB, sidaan ku arki karnay tilmaamahooda. Qiimaha noocyadan ee Shiinaha waa:
Qaabka leh 6/64 GB waxaa lagu qiimeeyaa 1698 yuan, oo ku saabsan 220 euro sarrifka
Nooca leh 6/128 GB wuxuu la imaanayaa qiimo 1998 yuan, oo ku saabsan 260 euro in la beddelo
Waxaan rajeyneynaa inaan wax badan ka ogaano suurtagalnimada soo -saarista Meizu 16Xs ee Yurub goor dhow. Waa maxay dareenka uu ka tagaa meel-dhexe?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Meizu » Meizu 16Xs ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Gmail waxay soo bandhigi doontaa qaab sir ah dhamaadka Juun
Nokia ayaa ku dhawaaqday dhacdo loogu talagalay Juun 6: laba taleefan oo cusub ayaa qarka u saaran